ESIBATHANDAYO BASILAHLEKELE: UKAPUTENI UTOM MOORE (1920 – 2021) | Scrolla Izindaba
ESIBATHANDAYO BASILAHLEKELE: UKAPUTENI UTOM MOORE (1920 – 2021)
Staff from across our hospitals come together to clap for Captain Sir Tom Moore, who raised almost £33 million for NHS charities – Thank you for everything, Sir Tom 💙#ClapForTom #ClapForCaptainTom pic.twitter.com/Jg2z8arGyo
Ngemuva kokulwela eBrithani eMpini Yesibili Yomhlaba, uKaputeni uTom waba yisibani sokukhanya ezweni ngesikhathi sobhubhane.
Ukaputeni uTom, njengoba aziwa kanjalo eBrithani, ugqugquzele umhlaba ngokukhulisa izigidi zabasebenzi bezempilo abalwa ne-Covid.
Ekugcineni, wasiza ekuqoqeni imali eyizigidi ezingama-R673 – ngemuva kokuqala ukuhamba ngezinyawo ama-laps ayikhulu ensimu yakhe ngaphambi kosuku lwakhe lokuzalwa lokuguba iminyaka eyi-100.
Udlule emhlabeni ngoLwesibili ngemuva kokuhlolwa watholakala ukuthi une-Covid-19 ngesonto eledlule.
IBrithani yangena emkhakheni womvalelo ngenyanga eyedlule ngoNdasa ngesikhathi esifanayo ncamashi neNingizimu Afrika, kodwa yayivele ingenye yamazwe athinteka kakhulu.
Kwase kuphele amasonto amabili kuqale umvalelo, futhi isimilo sasiphansi ngokungenathemba, ngesikhathi uKaputeni uTom, oneminyaka engama-99 ubudala, eqala ukubonwa ngabantu.
Ingqalabutho yempi yezwe yesibili yayifuna ukuqoqa imali yoxhaso lukahulumeni i-National Health Service (i-NHS), eyasheshe yanqotshwa yigciwane.
Ngakho-ke wathembisa ukuhamba iziqephu eziyikhulu zensimu yakhe ngaphambi kosuku lwakhe lokuzalwa lweminyaka engama-100.
Unikeze ingxoxo kamabonakude enesizotha kwi-Breakfast Show yomsakazi kazwelonke. Ngalesi sikhathi, wayeseqoqe imali engaphezudlwana kweziyi-R180,000, washaya ithagethi yakhe eyi-R20,000.
Ubuzwe ukuthi ngabe unawo yini amazwi okuqinisekisa isizwe, waphendula wathi: “Khumbula, kusasa wusuku oluhle, kusasa mhlawumbe uzothola konke okuzoba ngcono kakhulu kunanamuhla.”
Amazwi kaTom agqugquzela izwe, neminikelo yatheleka.
Uqoqe imali engaphezu kweyizigidi ezingama-R244 ngesikhathi eqeda ibanga le-100.
Emasontweni amabili kamuva, wakhipha ingoma ethi “You Never Never Walk Alone” nomculi uMichael Ball kanye ne-NHS Voices of Care Choir.
Imali etholakele kule ngoma iye kwi-NHS, yathatha ingqikithi yokuqoqwa kwemali kukaTom yaba yizigidi ezingama-R673, yeminikelo evela emazweni ayi-163.
Ingoma ime endaweni yokuqala kumashadi wase-UK, okwenza uCaptain Tom umculi omdala kunabo bonke owake wafika endaweni ephezulu.
UMoore ungeniswe esibhedlela ngeSonto ngemuva kokwelashelwa i-pneumonia isikhathi esithile nokuhlolwa etholakala ukuthi une-Covid-19 ngesonto eledlule.
Esitatimendeni, amadodakazi akhe, uHannah Ingram-Moore noLucy Teixeira, bathe: “Unyaka wokugcina wokuphila kukababa wethu wawumangalisa kakhulu. Uvuselelwe futhi waba nezinto abengakaze aphuphe ngazo. Ukunakekelwa ubaba wethu akuthola ku-NHS nakubanakekeli emasontweni ambalwa edlule neminyaka yokuphila kwakhe bekumangalisa.”
NgoLwesithathu ebusuku, izigidi zabantu kulo lonke elaseBrithani zihloniphe uKaputeni uTom ngokushaya izandla ngaphandle kweminyango yazo – isiko elaqala ngonyaka odlule labasebenzi bezempilo abalwa naleli gciwane ngaphambili.
Umthombo wevidiyo: @HHFTnhs
Umthombo wesithombe: @vaporsofficial